July 7, 2018 राशिफल Comments Off on भोलीको राशिफल आजै थाहा पाउनुहोस ! ३ राशिलार्इ अत्यन्त राम्रो, ४ राशिलार्इ ठिकै र बाँकीलार्इ अशुभ
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन : आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ २४ गते आइतवार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशीश्रीसूर्य उत्तरायण,ग्रीष्म ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल आषाढ २४ गते रविबार नेपाल सम्बत ११३८ तछलागा,सन् २०१८ जुलाई ८ तारिक कृष्णपक्ष दशमी तिथि अपरान्ह६ वजेर ४४ मिनेटसम्म,भरुणी नक्षत्र राती ३ वजेर १९ मिनेटसम्म,धृतियोग,वणिजकरण,आनन्दादियोग काल,सूर्य मिथुन राशीमा,चन्द्रमा मेष राशीमा ।
ॐः–राहुकालः–अपरान्ह५÷१८ वजेबाट ७÷१ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः–मध्यान्ह१२÷९ वजेबाट अपरान्ह १÷५२ वजेसम्म रहनेछ,दूरमुहूर्तः–अपरान्ह५÷१२ वजेबाट ६÷७ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷४१ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३६ वजेसम्म रहनेछ,गुली कालः–अपरान्ह३÷३६ वजेबाट ५÷१९ वजेसम्म रहनेछ, यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ६÷५८ वजेसम्म उद्वेग वेला,६÷५८ वजेदेखि ८÷४१ वजेसम्म चरवेला,८÷४१ देखि १०÷२४ वजेसम्म लाभवेला,१०÷२४ देखि १२÷७ वजेसम्म अमृतवेला,१२÷७ देखि १÷५१ वजेसम्म काल वेला,१÷५१ देखि ३÷३४ वजेसम्म शुभ वेला,३÷३४ देखि ५÷१८ वजेसम्म रोगवेला र ५÷१८ वजे देखि सूर्यास्तसम्म उद्वेगवेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ८÷१८ वजेसम्म शुभ वेला,८÷१८ वजेदेखि ९÷३४ वजेसम्म अमृतवेला,९÷३४ देखि १०÷५१ वजेसम्म चरवेला,१०÷५१ देखि १२÷७ वजेसम्म रोगवेला,१२÷७ देखि१÷२४ वजेसम्म काल वेला,१÷२४ देखि २÷४१वजेसम्म लाभवेला,२÷४१ वजे देखि ३÷५८ वजेसम्म उद्वेग र ३÷५८ वजे देखि सूर्योदयसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
ग्रह,गोचर सामान्य अनुकुल देखिन्छ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । वास्तुकला,चित्रकला तथा निर्माण सम्बन्धित कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ ।
खासै आजको दिन पनि अनुकुल देखिन्न । खर्च व्यवस्थापन गरेर काम गर्नु होला । सवैलाई आफ्नो ठानेर काम गर्दा धोका हुनसक्छ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन ।
लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् हेलचक्र्याई गरेमा दुःख पाईनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । आर्थिक कारोवारहरु विग्रिन सक्छन सचेत रहनु होला । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ ।
आर्थिक कारोवारमा विस्तारै सुधार आउने देखिन्छ । सहज र सरल तरिकाबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । मिलेर गरेका काम कम फलदायी हुनेछन् । स्वतन्त्र कामबाट लाभ लिन सकिने छ ।
समयमा पूर्ण सुधार देखिन्न । काममा देखिएका समस्या कम भएर जानेछन् । मेहनतपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । परिर्वतनको चाहान बढ्न सक्छ । आम्दानी खर्च वरावरै जस्तो हुनेछ ।
काम गर्ने वातावरण विग्रिन सक्छ । समयले साथ दिने छैन । खर्च बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्छन् । मानसिक तथा शरीरिक दूर्वलता बढ्नेछ ।
सामान्यतया दिन अनुकुल देखिन्छ । समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । इच्छा आकाँक्ष बढ्ने छन् । जीवन साथीको साथले मनमा उमङ्ग थपिनेछ । भौतिक सुखमा कमी आउन सक्छ । यात्राको योग टरेको छैन ।
संघर्ष गर्न सकिएन भने पछि परिनेछ । विरोधी परास्त हुनेछन् । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । नोकरी तथा राजनीतिबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन ।
कहि कतैबाट भ्रमको खेती हुनसक्छ सचेत हुनुहोला । समयमा निर्णय लिन सकिएन भने अवसर गुम्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ । पढाई लेखाई सामान्य प्रगति हुनेछ ।
शरीरिक शिथिलता बढ्नेछ । काम प्रतिको लगाव घट्नेछ । मनमा शान्ति मिल्ने छैन । काम गर्ने बातावरण खलबलिन सक्छ । अनावस्य विषयलाई लिएर तनाव हुनसक्छ । फजुल खर्च बढ्नेछ ।
समयको महत्व वुझेर काम गर्नु होला । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । काममा ढिला सुस्ति गर्दा अवसर गुम्न सक्छ सचेत रहनु होला ।
समय सुधारोन्मुख देखिन्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । आर्थिक समस्या कम भएर जानेछन् । आफन्तजनबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यापारमा क्रमिक सुधार आउनेछ ।
हिउको पहाडमा रेलको जोखिमपुर्ण यात्रा हेर्दा जो कोही को मुटु काप्छ ( भिडियो सहित हेर्नू होस )
निकिता पौडेलको प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र